Ngoku ungabona imifanekiso ye-3D yeApple Park kwiimephu zeApple | Ndisuka mac
Ngoku ungabona imifanekiso ye-3D yeApple Park kwiimephu zeApple
Esinye sezigxeko esenziwe kwiimephu zika-Apple kukungabikho komxholo xa kuthelekiswa nesona sikhuphisana naso, iimephu zikaGoogle. Ubuncinci, xa kufikwa kufakelo lwesakhiwo seApple Park, sinokuthi iApple ikukuphakama kwayo nayiphi na imbangi. Kufuneka sifikelele kwiimephu ze-Apple, jonga iApple Park kwaye ukhethe ukhetho lweApple Park eCupertino.
Kubalulekile ukukhetha ifayile ye- ukhetho lwemephuEwe, ukuba sitshintshela kwi umbono wesathelayithi, Siza kubona umfanekiso womzuzu odlulileyo, kwisigaba apho isakhiwo sasingagqitywanga.
Iinkcukacha ezinkulu esinokuzifumana kwifayile ye- Ukunikezelwa kwe3D, ekhoyo ngokukhawuleza xa sicofa kwiqhosha elisezantsi ngasekunene. Umzekelo, sinokubona ngokweenkcukacha ezinkulu: lngohlobo lwezakhiwo, iindlela kunye nezinto ezincedisayo. Nokuba siyafuna, sinokujonga ngokweenkcukacha iiphaneli zelanga zesakhiwo esikhulu.
Iinkcukacha zokumelwa ziyaqhubeka neenkcukacha zeendlela eziphakathi kwamagumbi ahlukeneyo. Sifumana, ukongeza kwisakhiwo esikhulu, i izakhiwo zokupaka, kufutshane nohola wendlela wama-280, umfuziselo Iqonga likaSteve Jobs kunye neendlela ezidibanisa ezinye izakhiwo nezinye. Ukuya kwi ichibi elincinci ngaphakathi kwesakhiwo esiyintloko esenziwe ngeringi.
Okokugqibela, nangona kunganxibelelananga ngokusondeleyo neApple, Izinto ezisingqongileyo zekhampasi entsha yeApple zijikelezwe kukutya okukhawulezayo. Ke ngoko, ukuba uziva ulambile emva kokundwendwela iApple Park, ungasoloko uzigcwalisa kakuhle iibhetri zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ngoku ungabona imifanekiso ye-3D yeApple Park kwiimephu zeApple
Yakha ilifu lakho ngeCloudMounter
Ukubhabha kukaMatthew Roberts kubonisa indawo yokugcina eApple Park